History | DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION
About DMA, History
February 27, 2017 DMA-MM
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ပွားမီ ၁၉၃၀ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ “ဆိပ်ကမ်းအရာရှိချုပ်ရုံး” (Principal Port Officer) ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စစ်ကြိုခေတ်တွင် “ရေကြောင်းဌာနခွဲ” (Mercantile Marine Department) ဟူ၍ လည်းကောင်း ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး (၁၅-၃-၁၉၇၂) ခုနှစ် ရက်စွဲပါ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ကြေညာချက် အမှတ် ၉၇ အရ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (Department of Marine Administration) ဟူ၍ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
The Department of Marine Administration was established since 1930 before the World War II and called “Principal Port Officer”. During the pre-war period, it was known as “Mercantile Marine Department”. It was reorganized and renamed as “Department of Marine Administration” on 16th March 1972 as per the notification No. 97 of Revolutionary Council dated on 15th March 1972.